Scaffolding Castings, forging, nohitsakitsahiko faritra
Izahay dia matihanina mpanamboatra sy mpamatsy ny scaffolding faritra ary koa orinasa fanondranana miaraka amin'ny forging, casting, totohondry, mangatsiaka mamorona sy ny fitsaboana ambony-toy ny mafana nandroso galvanisation, zinc plating ary vovoka coating sns… .. Efa namokatra sy manondrana Scaffolding casting, forging and stamping accessories vokatra ho an'ny tsena Eoropa sy Amerika Avaratra nandritra ny 20 taona mahery. Manana injeniera matihanina sy za-draharaha izahay afaka manome ny vokatra ampanjifaina isaky ny sary ...
Casting amin'ny habe lehibe
Fampandehanana habe lehibe: ny fanorenanay fanodinana habe lehibe dia mandrakotra faritra 60000 metatra toradroa sy velaran-trano 23.000 metatra toradroa. Misy mpiasa mihoatra ny 660, ao anatin'izany ny mpiasa teknika zokiolona 180 sy ny mpiasa teknika ambony kalitao 480. Ny orinasa dia orinasa manokana amin'ny fampivoarana sy ny fanamboarana fitaovana tsy mahazaka vy isan-karazany takian'ny indostria toy ny fanodinana mineraly, metallurgy, angovo, akora fananganana sns ... Ireo akora fototra tsy mahazaka akanjo ...
Fitaovana haingozy Izahay (M&E) dia mpanamboatra matihanina amin'ny faritra haingon-trano vy sy vy. miaraka amin'ny fitantanana mialoha sy ny filozofia miorina amin'ny stratejika dia mahazo fampandrosoana maharitra amin'ny resaka vokatra avo lenta sy laza tsara. M&E haingo vy sy vy fanariana na sandoka vokatra vita amin'ny fitaovana avo lenta, novokarina na ny fomba nentim-paharazana mpiasan'ny mpiasa sy ny fomba savoka very izay afaka manome toky antsika hamokatra tandavan-tampon'ny ...
Vokatra fantson-drano sy fantsom-panafody
Fampidirana ny vokatra M&E manondrana fantsona sy fittings, fitambarana, fantson-drano ary vokatra fitarihan-drano mandritra ny 30 taona mahery. Tsy misy fantsona Hub na fittings vita araka ny fenitra ASTM A888 amerikana, fenitra CSAB70 kanadiana ary fenitra eropeana EN877. tsy nisoratra fantsona sy fittings hub ao amin'ny IAMPO izahay (miaraka amin'ny marika UPC) ho an'ny marika "MMCST" ary amin'ny CSA ho an'ny marika "HB". VOKATRA ANTSIKA Miaraka amin'ny fantsona sy fittings, izahay koa dia manome fametahana vy tsy misy fangarony amin'ny habe samihafa manomboka amin'ny 1-1 / 2 "ka hatramin'ny 10". stee ...
Fantsona fantsom-pifandraisana sy vy mifangaro vy
Fantsona fantsom-pifandraisana sy vy mifangaro vy: ny fametahana ny fantsom-pifandraisana, ny fametahana vy tsy misy vy ary ny gasket izay ampiharina betsaka amin'ny indostrian'ny fantsom-pitrandrahana solika, ny fantsom-piaramanidina, ny rafitra fanondrahana. Ny fahaizan'ny famokarana dia 1 tapitrisa isan'andro. Manana tsipika famokarana feno izahay: fanodinana bobongolo, famokarana vokatra, fitsaboana ambony, fanodinkodinana volo ary famokarana visy. Inona no ataontsika dia mpamatsy OEM voamarina azo antoka ho an'ireo orinasa mpamokatra fiara lehibe manompo maro o ...
Varahina / Varahina Nickel
Manana fiaraha-miombon'antoka 4 izahay misy ny alimo Aluminium, Copper, Brass & Nickel - Ny famokaranay dia mamokatra Aluminium, vokatra paompin-drano mifototra amin'ny varahina, ary asa-tanana vita amin'ny varahina, izay misy 400 taonina isan-taona. –Ny lanjan'ny vokatra dia mety ho 0.05-100kg, ny haben'ny habe dia 800 * 800. Araka ny fepetra takiana, ny fitaovana dia afaka mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fanandramana ROHS, ary ny fahamendrehan'ny vokatra fanariana dia mety hahatratra CT7-CT8. Miaraka amin'ny spectrometer, ny fitaovana afaka ...
Ny vokatray novokarina tamin'ny kalitao avo lenta tamin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana azo antoka, teknolojia vaovao, fitaovana milina ambony & fanaraha-maso henjana. Amin'ny maha-orinasa iray mitarika eo amin'ny sahan'ny fanariana azy, dia manamboatra fitaovana miaraka amin'ireto fitaovana ireto izahay: GB (CHINA), ASTM (US), DIN (GERMANY), JIS (JAPAN): 304.304l, 316,316l, 410, cf8.cf3, cf8m, 1.4301,1,4303, .4308,1.4404,1.4408,1.4581, SCS13, SCS14, SCS13A, SCS14A, WCB, C45, C20, C10,15Cr3,15CrNi6,16MnCr5,34CrMo4,42CrMo4,56Ni monly, A3 ...
Hebei Metals & Engineering Products Company Ltd. dia natsangana tamin'ny 1974 ary namboarina indray avy amin'ny orinasam-panjakana mankany amin'ny orinasa tsy miankina amin'ny taona 2005. Mpisava lalana amin'ny mpanondrana casting izahay ao amin'ny faritanin'i Hebei, Sina. Miaraka amin'ny orinasa miorina amin'ny orinasa 2 feno ary manana mpiara-miasa mpanohana maharitra maharitra mpiara-miombon'antoka amin'ny fanatanterahana ny filan'ny mpanjifa isan-karazany amin'ny famokarana casting (amin'ny dingam-pitaovana samihafa & fanodinana entana), ny milina ary ny lamba amboniny sns …… Miaraka amin'ny governemanta Shina momba ny tontolo iainana pr. ..
Miaraka amin'ny orinasa miorina amin'ny orinasa 2 feno ary manana mpiara-miasa mpanohana maharitra maharitra mpiara-miombon'antoka amin'ny fanatanterahana ny filan'ny mpanjifa isan-karazany amin'ny famokarana casting (amin'ny fizotran'ny fitaovana & fanodinana maro samihafa), ny fametahana ny masinina ary ny fanakona ny tany sns …… Miaraka amin'ny politika fiarovana ny tontolo iainana ataon'ny governemanta China. , nanangana vola 20 tapitrisa RMB hafa izahay hanatsarana ny fananganana fotodrafitrasa. Miaraka amin'ny vokatra maherin'ny 30 taona manondrana traikefa / kalitao avo sy ekipa QA teknika henjana / mivoatra miaraka amin'ny mpanjifa sy ...
Aluminium / Brass Storz Fire Couplings Ary Nozera Ho an'ny Fiadiana Fiadiana
Fire Tube Nozzle sy Coupling Standard: Alemanina \_ American \_ Russian \_ BS Material Aluminium na Brass Diameter (mm) DN50 DN65 Pressure 1.6Mpa Inspecation Pressure 2.4MPa Misy rano madio antonony, sombin-tsolika mifangaro fantson-tsolika mifangaro fantsom-pandrefesana tsindry Flow Range QZ3.5 / 5 DN50 (mm) 16mm 0.35Mpa 5L / S> 25m QZ3.5 / 7.5 DN65 (mm) 19mm 0.35Mpa 7.5L / S> 28m